चामलको पिठो प्रयोग गरेर यसरी चम्काउन सकिन्छ अनुहार (विधिसहित) – Khabar PatrikaNp
January 8, 2021 126
Prevपुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय !
Nextप्रचण्ड लाटोकोसेरो हुन्, दिउसो आँखा देख्दैनन्’ – केपी शर्मा ओली
आफ्नै कार्यकालमा वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउने भत्ता तथा सुविधा उपलब्ध गराउन सरोकारवालालाइ निर्देशन : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
कर्णालीका कृष्ण कंडेल, कलाबाटै समाजसेवा
१ वर्षकी बालिकाले पहिलो पटक मुख खोलिन त्यो रात केभएको थियो भुत हुँ भन्दै अंकलले बोकेर लानुभयो….हेर्नुहोसभिडियो
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (33674)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (25161)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (22516)
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (21752)